Ny sambokely – Tsodrano
ISAIA 6 : 1-8
I KORITIANA 15 : 1-17
LIOKA 5 : 1-11
In’efatra raha amin’ny Testementa Vaovao no jerena no hahita ny tantaran’i Jesosy sy ny Sambokely. Ny iray voalohany dia ny nahatratran’ny tafio-drivotra ny sambokely izay nisy an’i Jesosy sy ny mpianany. Ny faharoa dia ny nahitan’ny mpianatra, izay tao an-tsambokely, an’i Jesosy nadehandeha teny ambony ranomasina. Ny fahatelo sy ny faha-efatra dia ity tantara voalaza eto amin’ny Lioka toko faha-dimy ity izay hahitana ani’ Jesosy mitoriteny amin’ny vahoaka rehefa niataka kely ny morona ary koa ny nanirahan’i Jesosy an’i Simona sy ny namany tamin’ny lalin-dalina kokoa hanarato.
Mazàna ny sambo na ny sambokely no nampisehona ny fiainan’ny olona na ny fianan’ny fikambanana. Raha ity eto amin’i Lioka ity dia mampiseho indrindra ny Fiangonana ny sambokely. Ary moa tsy izany tokoa va no hitatsika eto. Indro Jesosy naka sambokely iray,izay nahatany kely ny olona, toa ny polpitra iray ary araka ny voalazan’i Lioka dia nanomboka nitoriteny tamin’ny olona Izy. Iza amitsika no tsy hitsiriritra izany ka hisaina fa rehefa tonga any am-piangonana isika dia i Jesosy mihitsy no indry mitoriteny ery amin’ny polipitra. Ho an’ny protestanta dia manana izay maha izy azy ny toriteny ary raha fanompom-pivavahana tsy misy toriteny dia tsy vitsy no milaza azy ho tsy fanompom-pivavahana. Alaivo an-tsaina hoe I Jesosy no mitoriteny eo amin’ny vavan’ny mpitandrina na ny mpitoriteny. Hanao ahoana aminao ny lanjan’izany.
Angamba io sambokely io, sambokely efa tonta ka nofatsipatsiana mba tsy hidiran’ny rano. Nefa dia sambokely noraisin’i Jesosy hitoriana teny. Toa sarin’ny Fiangonatsika izany. Fiangonana manana izay fahalemeny, manana izay maha olombelona azy, fiangonana mahantra nefa dia neken’i Jesosy hidirana sy hitenenana.
Rehefa avy nitoriteny Jesosy dia niteny tamin’i Simona Petera hoe : « Mandrosoa any amin’ny lalina ka alatsao ny haratonareo hahazoana hazandrano ». Raha ny teny grika nandika ny teny hoe lalina no jerentsika dia tsy midika fotsiny hoe rano lalina fa hatsana tsy hita noanoa mihitsy no tiany ho lazaina. Raha izany azo lazaina ho toa izao no notenen’i Jesosy « Ry Simona mandehana any amin’ny lalina ianao ka sedrao ny fisafotofoton’ny rano sy ny halaliny ». Namaly avy hatrany Simona Petera hoe : »Nandritry ny alina no nikelezanay aina nefa tsy nahazo, nefa noho ny teninao dia halatsako ihany ny harato ». Raha raisitsika ho ny Fiangonana dia ho toa izao angamba no lazaitsika : » Efa nanao izay azonay natao izay Tompo teto amin’ity fiangonana ity nefa dia hitanao fa izao ihany no fandrosoany ». Sao dia tsy mbola nisetra ny lalina kosa aza ianao ry Fiangonana fa nihanina fotsiny tamin’ny : « efa nanao izay azo natao » I Simona Petera dia niteny hoe : « Nefa noho ny teninao dia… » Ny tena kristiana dia mihaino ny tenin’ny Tompo ary vonona hanao izay nanirahany na dia heverina ho zava-tsy vitan’olombelona aza.
Ny tohin’ny tantara dia ny fahazoan-dRy Simona Petera hazandrano be. I Lioka dia nanipika ny habetsahan’izany : tsitra ny harato, ary niantso namana mihitsy vao nahazaka ny hazandrano. Ny fandrosoan’ny Fiangonana dia tsy misy afatsy ny fihainona ny tenin’ny Tompo, ny fanekena izany ary ny fanatanterahana ny nanirahan’ny Tompo eny fa na dia zava-tsarotra aza no hiverantsika izany. Impiry isika no diso fanatenana eo amin’ny fanompona ny Tompo. Lany fotoana, lany vola aman-karena, na ny fahasalamana aza tsy zarizary nefa dia fahadisom-panatena foana no vokany. Na izany aza mbola lazain’ny Tompo ihany fa mbola tokony hanao mafimafy kokoa. Raha mino isika dia manampy ny Tompo.
Izay hamarako azy dia ny tenin’i Jesosy tamin’i Petera hoe : « Aza matahotra ». Hery lehibe ho an’ny Fiangonana io. Na dia sangy mihoatra ny loha aza no takin’i Jesosy dia miteny amnao Izy hoe : « Aza matahotra ». Teny fampiasan’i Jesosy io taorin’ny nitsanganany tamin’ny maty ary dia izay koa no hamaranako ity toriteny ity.
Mpaminany tsy masina an-taniny
Sambatra ny malahelo
Clin d'oeil (18)
Tsara ho Fantatra (47)
Retrouvez tous nos articles depuis l’année 2002. Sélectionner un mois décembre 2021 (2) juillet 2021 (1) juin 2021 (2) mai 2021 (2) avril 2021 (1) février 2021 (1) janvier 2021 (1) décembre 2020 (2) novembre 2020 (2) octobre 2020 (1) septembre 2020 (1) août 2020 (1) juin 2020 (2) mai 2020 (2) avril 2020 (2) mars 2020 (2) février 2020 (2) janvier 2020 (2) décembre 2019 (6) novembre 2019 (4) octobre 2019 (2) juin 2019 (2) mai 2019 (1) avril 2019 (6) mars 2019 (1) février 2019 (1) décembre 2018 (5) novembre 2018 (1) août 2018 (2) juillet 2018 (2) mai 2018 (2) avril 2018 (1) mars 2018 (8) février 2018 (2) janvier 2018 (4) décembre 2017 (6) novembre 2017 (1) octobre 2017 (1) septembre 2017 (1) août 2017 (3) juillet 2017 (2) juin 2017 (7) mai 2017 (2) avril 2017 (4) mars 2017 (2) février 2017 (1) janvier 2017 (1) décembre 2016 (2) octobre 2016 (1) juillet 2016 (1) juin 2016 (1) mai 2016 (2) mars 2016 (2) février 2016 (6) janvier 2016 (2) décembre 2015 (5) novembre 2015 (1) octobre 2015 (2) septembre 2015 (2) juillet 2015 (1) avril 2015 (3) février 2015 (3) janvier 2015 (4) décembre 2014 (3) novembre 2014 (4) octobre 2014 (1) août 2014 (1) mai 2014 (1) avril 2014 (6) mars 2014 (3) décembre 2013 (1) novembre 2013 (1) octobre 2013 (2) août 2013 (6) juillet 2013 (3) juin 2013 (3) mai 2013 (2) avril 2013 (1) mars 2013 (6) février 2013 (4) janvier 2013 (2) août 2012 (5) juillet 2012 (5) juin 2012 (3) mai 2012 (3) avril 2012 (7) mars 2012 (3) février 2012 (2) janvier 2012 (3) décembre 2011 (3) novembre 2011 (2) octobre 2011 (5) septembre 2011 (4) août 2011 (1) juillet 2011 (6) juin 2011 (5) mai 2011 (4) avril 2011 (7) mars 2011 (1) février 2011 (1) janvier 2011 (3) décembre 2010 (2) novembre 2010 (1) octobre 2010 (1) septembre 2010 (3) août 2010 (1) juillet 2010 (6) juin 2010 (1) mai 2010 (3) avril 2010 (1) mars 2010 (5) février 2010 (4) janvier 2010 (6) décembre 2009 (2) novembre 2009 (3) octobre 2009 (3) septembre 2009 (1) août 2009 (1) juillet 2009 (1) juin 2009 (2) mai 2009 (5) avril 2009 (10) mars 2009 (4) février 2009 (5) janvier 2009 (7) décembre 2008 (5) novembre 2008 (6) octobre 2008 (3) septembre 2008 (4) août 2008 (4) juin 2008 (1) avril 2008 (1) mars 2008 (1) février 2008 (1) janvier 2008 (2) décembre 2007 (1) novembre 2007 (1) août 2007 (3) juin 2007 (4) mai 2007 (1) avril 2007 (1) mars 2007 (4) février 2007 (4) janvier 2007 (7) décembre 2006 (9) novembre 2006 (4) octobre 2006 (7) septembre 2006 (4) août 2006 (2) juillet 2006 (4) juin 2006 (3) mai 2006 (5) avril 2006 (7) mars 2006 (11) février 2006 (8) janvier 2006 (9) décembre 2005 (10) janvier 2005 (1) septembre 2004 (2) août 2004 (3) juillet 2004 (5) juin 2004 (4) mai 2004 (2) avril 2004 (6) mars 2004 (2) février 2004 (3) janvier 2004 (5) décembre 2003 (4) novembre 2003 (6) octobre 2003 (1) mai 2003 (4) avril 2003 (17) mars 2003 (1) février 2003 (4) décembre 2002 (3) novembre 2002 (1) octobre 2002 (6) septembre 2002 (4)
Ireo aretin’ny fiainam-panahy 17/12/2021
Lova Faniry malalanay 13/12/2021
Ny faharetana 06/07/2021
Ny BAIBOLY MALAGASY 21/06/2021
Ny dadako 19/06/2021
160 718 visites
advento ady alina aretina Baiboly batisa fahafatesana fahavalo fahoriana Famelan-keloka famonjena fampijaliana fanahy Fanahy Masina fanantenana fanjakana faty fiadanana fiainana fiangonana fifaliana finoana firenena fitiavana fivavahana harena kolikoly kristiana loza Madagasikara malagasy marina maty mpaminany mpampianatra mpitandrina rano rariny ratsy tany tsara vahoaka vehivavy velona voninahitra
© 2022 Tsodrano. Theme by Anders Norén.